စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: အရိုးတွန့် ခြင်း
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် သက်သေ အဖြစ်ရှိပြီး၊ နအဖ ခေါင်းဆောင် သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် အမိန့်ပေး ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အပြစ်မဲ့ သော မြန်မာ ပြည်သူလူထုနှင့် ထိုင်း ငါးဖမ်း သင်္ဘောတစ်စီးရှိ ထိုင်း လူမျိုးများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သော လူသတ်မှုသည် ယခု အခါတွင် ကမ္ဘာ့ သတင်းများတွင် ပါရှိနေပြီး၊ သန်းရွှေ၏ ကြမ်းကြုမှုများကို ဖေါ်ထုတ်ကာ အပြစ်ပေးရမည့် အချိန် ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို ကြားဖြတ်လုယူထားသော အာဏာရှုး သန်းရွှေအား တရားဥပဒေအတိုင်း အပြစ်ပေးနိုင်ရန်မှာ မြန်မာ ပြည်သား အားလုံး၏ အမျိုးသားရေး တာဝန်ဖြစ်လို့ နေပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ မြန်မာပြည်သူများ လုပ်နိုင်သော အလုပ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့မိပါသည်။ လုပ်ကြပါရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ လုပ်ရမည့် ကိစ္စမှာ ..
အထက်ပါ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် သက်သေ အဖြစ်ရှိသော အမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာ မက၊ အပြစ်မဲ့သော ထိုင်းလူမျိုးများကိုပါ သတ်ဖြတ်သော အမှု ဖြစ်နေပါသည်။ ထို အမှုတွင် သေသွားသော ထိုင်းလူမျိုးများ၏ မိသားစုများ၊ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက လက်ခံနိုင်မည့် ကိစ္စ တစ်ခု မဟုတ်ပေ။
ထိုကြောင့် အဆိုပါ သတင်းနှင့် အသံဖိုင်ကို သာမန် ထိုင်းပြည်သူများ၊ ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် ထိုင်းသတင်းဌာနများသို့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အမျိုးသားရေး တာဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူ သတင်းပေးပို့ အသိပေးခြင်းဖြင့် သန်းရွှေ၏ ရက်စက်စွာ ကျူးလွန်သော လူသတ်မှုအား ဖော်ထုတ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
မြန်မာလို အသံကို ဒီနေရာတွင် ရယူနားဆင်နိုင်ပါသည်။
Than Shwe 'ordered troops to execute villagers'
The French Government has said that it comes close to beinga“crime against humanity”, and last week Robert Gates, the US Defence Secretary, called it “criminal neglect”. Ifatribunal like the ones established for Rwanda and the former Yugoslavia is ever created for Burma, then Mr Aung Lin Htut will doubtless be called to give evidence. He sought asylum in the US in 2005, along with six members of his family, afterapurge against the country’s prime minister and intelligence chief of the time by General Than Shwe destroyed the careers ofageneration of intelligence officers. Given the control of information in Burma, his account is impossible to verify. But it has credibility because it is the first time since his defection that Mr Aung Lin Htut has made any public comment on his former masters. In May 1998 he was stationed on Zadetkyi island,afrontline base close to Burma’s maritime border with Thailand. The commander of the base was Colonel Zaw Min, who is now Minister for Electric Power and general secretary of the Union Solidarity and Development Association, the junta’s grassroots organisation.A unit led by the colonel landed on Christie Island and found 59 people living there to gather wood and bamboo, in violation of Burmese law. The order came back from headquarters that they were to be “eliminated”. Myint Swe, an air force general, said that he wasareligious person, and that the matter should be handled delicately. He said that he was very concerned by the timing of the elimination order – just after lunch,atime when General Maung Aye, now the number two in the junta, was usually drunk.
အချိန် 10:25 PM